Antsirabe: Trano lehibe 3 no indray levon’ny afo
Nitrangana haintrano teto Antsirabe, tao amin’ny Fokontany Ivory. Toerana fandrafetana misy masinin-kazo no nambaran’ny olona ho niavian’ny afo ka niitatra tamina trano roa hafa izany ka isan’ny lasibatra ny tranon’ny lehiben’ny Fokontany Ivory, Rakotonandrasana André.
Tsy nisy noraisina ny entana tamin’ireo trano telo ireo saingy avotra kosa ny ain’ireo olona.
Nambaran’ireo olona nanodidina fa mampiahiahy ny afo satria efa in-3 no nirehitra ity toeram-pandrafetana ity.
Saika savorovoro no nitranga teo amin’ireo tompontrano sy ny Fokonolona rehefa tonga ny mpanao gazety satria ankoatra ny fanazavana nentin’ny lehiben’ny Fokontany izay lasibatra dia nikasa hitondra fanazavana hafa ny tompontrano ka nahatezitra ny olona satria voalaza fa nisy mpiambina ilay toeram-piasana saingy tsy niantso vonjy izy ireo.
Olana hatrany ho an’Antsirabe moa ny tsy fisian’ny mpamonjy voina na dia am-bolana maro aza no nampanatenain’ny Ben’ny Tanàna fa efa hahazo izany ny tananan’Antsirabe, saingy mbola miesona aloha hatreto.